"ရဟတ်ယာဉ်" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ - ဝီကီပီးဒီးယား
"ရဟတ်ယာဉ်" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ
၁၅:၀၀၊ ၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၀ ရက်နေ့က မူ
၄၃၉၇ ဘိုက် ပေါင်းထည့်ခဲ့သည် , ပြီးခဲ့သည့် ၁၀ နှစ်
၂၀:၄၀၊ ၅ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၀ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်)
FoxBot (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
အရေးမကြီး (robot Adding: sh:Helikopter)
၁၅:၀၀၊ ၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၀ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်) (နောက်ပြန် ပြန်ပြင်ရန်)
[[File:LAPD Bell 206 Jetranger.jpg|thumb|LAPD Bell 206 ရဟတ်ယာဉ်]]
ရဟတ်ယာဉ်ဆိုသည်မှာ တစ်ခုသော သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုသော ဒလက်များဖြင့် ပျံသန်းရန်နှင့် မောင်းနှင်ရန်ပြုလုပ်ထားသော လေကြောင်းသွားယာဉ်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ အမျိုးအစားခွဲရာတွင် ရဟတ်ယာဉ်ကို တောင်ပံအသေတပ်ဆင်ထားသော လေယာဉ်များမှ ခွဲခြားနိုင်ရန် ဒလက်ယာဉ် (rotorcraft) သို့မဟုတ် လည်ပတ်နေသောအတောင်ပံများရှိသည့် လေကြောင်းသွားယာဉ် (rotary-wing aircraft) ဟုခွဲခြားသတ်မှတ်လေ့ရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် ရဟတ်ယာဉ်သည် မတင်ပျံသန်းနိုင်သည့်အားကိုမတင် အလယ်အူတိုင်ရှိပျံသန်းနိုင်သည့် လည်ပတ်နေသောပင့်အားကို ဒလက်မှရရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ 'helicopter' ဟူသော စကားလုံးမှာ ပြင်သစ်ဘာသာ hélicoptère မှဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်ပြီး ၁၈၆၁ ခုနှစ်တွင် Gustave de Ponton d'Amecourt မှ စတင်သုံးနှုန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုစာလုံးမှာ ဂရိဘာသာ helix/helik- (ἕλικ-)အလယ်အူတိုင်ရှိ လည်ပတ်နေသော pteron (πτερόν) = အတောင်ပံ <ref>[http://www.etymonline.com/index.php?term=helicopter "helicopter"]. Online Etymology Dictionary. Retrieved: [[28 November]]Rotor []ဟုခေါ်သည့် </ref><ref>Cottezပန်ကာများမှ 1980,ရရှိကြပြီး p.တည့်တည့် 181.</ref>ဟူသောတက်နိုင်၊ စကားလုံးမှတဆင့်ဆင်းနိုင်ကြသည်။ လာခြင်းဖြစ်သည်။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာ 'helicopter' ဟူသော စကားလုံးမှာ ပြင်သစ်ဘာသာ hélicoptère မှဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်ပြီး ၁၈၆၁ ခုနှစ်တွင် Gustave de Ponton d'Amecourt မှ စတင်သုံးနှုန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုစာလုံးမှာ ဂရိဘာသာ helix/helik- (ἕλικ-) လည်ပတ်နေသော pteron (πτερόν) = အတောင်ပံ <ref>[http://www.etymonline.com/index.php?term=helicopter "helicopter"]. Online Etymology Dictionary. Retrieved: [[28 November]] [] </ref><ref>Cottez 1980, p. 181.</ref>ဟူသော စကားလုံးမှတဆင့် လာခြင်းဖြစ်သည်။
လေကြောင်းသွားယာဉ်များထဲ၌ ရဟတ်ယာဉ်၏ အဓိကအားသာချက်မှာ ယာဉ်ကိုရှေ့သို့တိုးရန်မလိုဘဲ အပေါ်သို့မတင်နိုင်စွမ်းရှိသည့် လေထဲတွင် လည်ပတ်နေသောဒလက်များပင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ရဟတ်ယာဉ်သည် ပြေးလမ်းမလိုအပ်ဘဲ ဒေါင်လိုက် အတက်အဆင်း ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ထိုအကြောင်းများကြောင့် ရဟတ်ယာဉ်ကို သာမန်အတောင်ပံတပ်လေယာဉ်ပျံများ အတက်အဆင်းမပြု နိုင်သည့် လူသူမရှိသော သို့မဟုတ် လူဦးရေအလွန်ထူထပ်သော နေရာများတွင် မကြာခဏဆိုသလိုအသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ ဒလက်မှ မတင်အားသည် ရဟတ်ယာဉ်ကို တစ်နေရာထဲတွင် ရပ်တန့်ပျံသန်းရာတွင် အခြား ဒေါင်လိုက်အတင်အဆင်းပြု နိုင်သော(VTOL) လေကြောင်းသွားယာဉ်များထက် ပိုမို ထိရောက်ခြင်းဖြစ်စေနိုင်ပြီး အခြားအတောင်ပံတပ် လေကြောင်းသွားယာဉ်များ မလုပ်ဆောင်နိုင်သော လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ပြီးမြောက်စေနိုင်သည်။
ရဟတ်ယာဉ်များသည် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကဏ္ဍ ၊ ဆောက်လုပ်ရေး ကဏ္ဍ ၊ မီးသတ်ခြင်း ၊ ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် စစ်ဘက်ကဏ္ဍတို့တွင် ကျယ်ပြန့်စွာ အသုံးပြုသော ယာဉ်များ ဖြစ်ကြသည်။
ရဟတ်ယာဉ်များကို၎င်းတိုကို လေကြောင်းသမိုင်း၏ ပထမရာစုဝက်မှာပင် စတင်တည်ဆောက်ခဲ့ကြပြီး အချို့မှာ အနည်းငယ်မျှသောပမာဏကို ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ၁၉၄၂ ခုနှစ်တွင် မှ အီဂေါ စီကောစကီး (Igor Sikorsky) ပုံစံထုတ်သော ရဟတ်ယာဉ်မှာ အပြည့်အစုံထုတ်လုပ်မှု သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး<ref name="Munson">Munson 1968</ref> ၁၃၁စီးမျှတည်ဆောက်ခဲ့သည်။<ref name="Hirschberg"> Hirschberg, Michael J. and David K. Dailey, [http://vtol.org/History.htm "Sikorsky." ''US and Russian Helicopter Development In the 20th Century'']. American Helicopter Society, International. [[7 July]] [].</ref> ယခင်က ပုံစံများတွင် အဓိကဒလက်တစ်ခုထက်ပို၍သုံးခဲ့ကြသော်လည်း ပင်မ ဒလက်တစ်ခု နှင့် အမြီးပိုင်းရှိ အားစုံတွဲကိုခုခံသော ဒလက်(antitorque tail rotor)ပါရှိသော ဤပုံစံကို တကမ္ဘာလုံးမှ ရဟတ်ယာဉ်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြသည်။
== သမိုင်းကြောင်း ==
အေဒီ ၄၀၀ ခုနှစ်ခန့်မှစ၍ တရုတ်ကလေးငယ်ကလေးများသည် ဝါးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ပျံသန်းနိုင်သည့် ကစားစရာများဖြင့် ဆော့ကစားခဲ့ကြသည်။ ထိုကစားစရာများမှာ ဥရောပသို့တိုင်အောင် ပျံနှံ့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ၁၄၆၃ ခုနှစ်တွင် ဥရောပမှ ပန်းချီကားတွင် ထည့်သွင်းရေးဆွဲထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ ၄ရာစုနှစ် တရုတ်ပြည်တွင် ရေးသားခဲ့သော ပေါင်းဖူတောင်း (Pao Phu Tau သို့ Pao Phu Tzu သို့ Bao Pu Zi, 抱朴子) ဟူသော စာအုပ်တွင် လည်ပတ်နေသော တောင်ပံများပါသည် လေယာဉ်ပျံအကြောင်းကို ဖော်ပြခဲ့သည်။
၁၇၅၄ တွင် ရုရှတို့က ပန်ကာဒလက်ကို အသုံးပြု၍ လေထဲသို့ ပျံတက်နိုင်သော ယာဉ်ပုံစံကို ရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။ ၁၈၆ဝ မှ ၁၈၈ဝ ကာလအတွင်း ရဟတ်ယာဉ် ပုံစံ မျိုးစုံကို တီထွင် ခဲ့ကြသည်။ ၁၈၈ဝတွင် သောမတ် အက်ဒီဆင်က ရဟတ်ယာဉ် ပုံစံငယ် တစ်ခုကို တည်ဆောက်ခဲ့သည်။
=== ပထမအကြိမ်ပျံသန်းခြင်းနှင့် အစောပိုင်းတည်ဆောက်မှုများ ===▼
၁၉၀၆ တွင် ပြင်သစ် ညီနောင်နှစ်ဦးက ရဟတ်ယာဉ်ကို တီထွင်ရန် ကြံဆခဲ့ကြပြီး ၁၉၀၇ စက်တင်ဘာ (၂၉) တွင် စမ်းသပ်ပျံသန်းနိုင်ခဲ့ရာ လေထဲတွင် တစ်မိနစ်ကြာခဲ့ပြီး အမြင့် (၂) ပေခန့် မြင့်အောင် ပျံသန်းနိုင်ခဲ့သည်။ ထိုနှစ်ထဲတွင်ပင် အခြား ပြင်သစ် ပညာရှင်တစ်ဦးက ပေ (၂၀) အမြင့်သို့ ပျံသန်းနိုင်သော ရဟတ်ယာဉ်ကို တီထွင် နိုင်ခဲ့သည်.။ ၁၉၅၁ တွင် အမေရိကန် ရေတပ်က တာဘိုင်အင်ဂျင်သုံး ရဟတ်ယာဉ်ကို စမ်းသပ်နိုင်ခဲ့သည်။ (၁၉) ရာစု နှောင်းပိုင်း ရောက်လာသောအခါ ပိုမို၍ ပေါ့ပါး လှျင်မြန်ပြီး စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားသော ရဟတ်ယာဉ်များ တီထွင်နိုင်လာခဲ့ကြသည်။
=== ပထမအကြိမ်ပျံသန်းခြင်း ===
leonardo da vinci သည်လည်း လေထဲသို့ ဒေါင်လိုက်တက်ဆင်းပျံသန်းနိုင်ရန် လွန်သွားကဲ့သို့ပန်ကာဒလက်ပါဝင်သောပုံကို ရေးဆွဲစိတ်ကူးခဲ့ ဖူးသည်။ ရဟတ်ယာဉ်တီထွင်မှုဆိုင်ရာအကြံအစည်များကို မဖြစ်နိုင်ဟု သူ့ခေတ်အခါက လေကြောင်းဆိုင်ရာပညာရှင်များက ငြင်းဆိုနေသည့်ကြားထဲမှ ဆိုင်မော့ စကီး သည်အောင်မြင်မှုရအောင် တီထွင်နိုင်ခဲ့သည်။
▲=== အစောပိုင်းတည်ဆောက်မှုများ ===
ရဟတ်ယာဉ်များ၏ လေထဲတွင် ရပ်တန့်နိုင်ခြင်း ၊ ပြေးလမ်းမလိုခြင်း စသော အားသာချက်များကြောင့် တိုက်ခို်က်ရေး ရဟတ်ယာဉ်များသည် စစ်ပွဲ၏ အဆုံးအဖြတ်ကို ပေးနိုင်သည်အထိ အသုံးဝင်လာခဲ့ကြသည်။ ထင်ရှားသည့် တိုက်ခိုက်ရေး ရဟတ်ယာဉ်များမှာ -
#AH 1 Cobra
#Mil Mi 24
#AH - 64 Apache
=== ရဟတ်ယာဉ်လုပ်ငန်း စတင်မွေးဖွားခြင်း ===
"https://my.wikipedia.org/wiki/အထူး:MobileDiff/61328" မှ ရယူရန်